မြန်မာမှာ အွန်လိုင်းကနေ ပိုက်ဆံရချင်လ&#4 — MYSTERY ZILLION
မြန်မာမှာ အွန်လိုင်းကနေ ပိုက်ဆံရချင်လ&#4
December 2008 edited February 2009 in Other
နည်းနည်းသိချင်လို့ပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အွန်လိုင်းကနေပိုက်ဆံရချင်ကြလားမသိဘူး
ဥပမာဗျား ပေ၇ာ ဂျက် သေးသေးလေးလုပ်ပြီးတော့ အလုပ်လည်းမထိခိုက်ဘူးဗျား ပြီးတော့ ဘလော့ တို့ တစ်ကိုယ်ရေ စာမျက်နှာတို့ကနေပြီးတော့ ပိုက်ဆံရချင်ကြလားမသိဘူး
answer is very simple and very short.....
yes.... i want....
but i don't know, how i do it's. for get money.:39:
ဟုတ် လုပ်ဖို့ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် လူတွေစိတ်ဝင်စားမူရှိမရှိ သလိုသောကြောင့် ဒီလိုမေးကြည့်တာပါ ကျေးဇူးပါ
မြန်မာမှာ အွန်လိုင်းကနေ ပိုက်ဆံရချင်လ
တရားတဲ့ နည်းလမ်းက ဆို ရချင်တာပေါ့။
မရားလုပ်ပြီး ရတဲ့ ပိုက်ဆံ ဆို .......မလိုချင်ပေါင်။
ပိုက်ဆံကို online ကနေရချင်ပါကြောင်း...:71::71::71:
ထိုထက်အရေးကြီးတာက... online ကနေ ပိုက်ပိုက်ကိုဘယ်လိုရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအများတကာ
အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ လက်ရှိမှာ online ကနေ outsource တွေယူပြီး project တွေလုပ်နေပါတယ်
အွန်လိုင်းကနေပိုက်ဆံရချင်လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မြင်လို့ဝင်လာတာ ... ဘယ်သူများအလှူလုပ်နေသလဲလို့
ရချင်တာပေါ့ဗျာ ... အခုတော့ ကြိုးစားနေတယ်။ Template တွေလုပ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သွားရင် freelance porjects တွေလိုက်မယ်။ တချို့ projects တွေဆို ဒေါ်လာထောင်သောင်းချီတယ်ဗျာ သရေကျတယ်။ နောက် ၂နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ ရလောက်ပြီထင်တယ်။ ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ် ဖြစ်နိုင်ရင် group ကြီးတစ်ခုဖွဲ့ပြီး Outsourcing တွေပဲလိုက်လုပ်ချင်တာ။
ဒီမှာ သရေကျစရာတွေရှိတယ် :P ကိုယ့်ဘက်ကသာ ready ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။
ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ်သိလို့ ပိုက်ပိုက်ရချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုနေရာမျိုးကပါဝင်ရပါ့မလဲ လို့ မတွေးရဲဘူး။ အွန်လိုင်းကနေအလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ မီးပုံမှန်လာအောင် negotiate လုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ခန့်ရင်တော့ စဉ်းစားမယ်လေ။:)) အဲဒီရာထူး ထွင်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
ပျော်စေပျက်စေ ပြောတာပါ။ ချော်တောငေါ့သွားတယ်ဆိုရင် ခွင့်လွတ်လှည့်..။
ကျွန်တော်လည်း creativefox21 ပြောတာကို သဘောကျတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ outsourcing လုပ်ပြီး ရေးကြရင် ကောင်းမယ်နော်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပညာလည်း ရမယ်။ ပိုက်ဆံလည်းရမယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက လုပ်နိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။
ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာကတော့ ကျွန်တော်က ဒီ Project တစ်ခု ကိုရေးချင်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဒီ project ကို MZ နာမည်နဲ့ ယူလိုက်မယ်။ ရေးတာကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ရေးပေါ့။ အဲ့ဒီအတွက် MZ ကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတော့ ပြန်ပေးရမယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုလည်း MZ က နည်းနည်းပါးပါး ကူညီပေါ့ဗျာ။ ဒါဆိုရင် project လည်း မြန်မြန်ပြီးမယ်။ quality ကိုလည်း ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်မရရင် ရတဲ့လူတွေက MZ မှာ အများကြီးပဲလေ။
စိတ်၀င်စားတာပေါ့။ ပညာလည်းရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး။
ပညာလည်းရ ၀င်ငွေလည်း ရမယ့်ကိတ်စကို အားပေးပါတယ်။တကယ်လို့လုပ်ဖြစ်ရင် aroZIf ကိုလေးပြောပါနော်။:)
ပထမဦးဆပြီး Bank Account တစ်ခုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် Paypal Account တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးသွားရင်တော့ Outsourcing site တွေမှာ ဝင်ပြီး bid လုပ်လို့ရပါပြီ
ကျနော် getafreelancer.com နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး myanmaritpros.com မှာ အကိုတယောက် သူ့အတွေ့အကြုံရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်။ အားကျစရာပါ။ မဖတ်ရသေးတဲ့သူများ http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id=1445004%3ABlogPost%3A97309 မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း အွန်လိုင်းကနေပိုက်ပိုက် ရချင်တယ်ဗျို့......
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကိုယ်ဘာတွေတတ်ထားဖို့လိုလဲ ဘာတွေလေ့လာထားဖို့လိုလဲ....
ကို creativefox21 ပြောသလို template တွေနားလည်တတ်ကျွမ်းသွားရင် အိုကေတယ်လား
ဥပမာ blog template code တွေ forum site တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိရင်
Coding ပိုင်း တွေ Database တွေပါပိုင်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Project တွေကအမျိုးမျိုးရှိတာလေ
Template Design (sometimes in Design Only and sometimes in HTML or php and it'll up to the customer's need)
(creating the dynamic sites without using CMSs etc...)
(keeping an eye to the customer's site to findavulnerability and reporting to the webmaster and advising how to fix)
အရင်ဆုံး.. thread ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ဂျစ်ပစီကိုကျေးဖူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ…:)
နောက်ပြီးတော့၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကို လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ…:)
ဒီလိုဗျ…အဲဒါကိုစေတန်ပြောတဲ့..သိချင်ရင် ဂျစ်ပစီကိုမေးဆိုတဲ့ သူရအောင်ပြောတဲ့ဟာပေါ့ဗျာ….:P:P:P
ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုလုပ်မယ်ဗျာ… ပြီးတော့ freelance website တွေမှာ…account တစ်ခုစီအရင်ဆုံးလိုက်လုပ်မယ်ဗျာ…
ပြီးပြီဆိုရင်…အဲဒီ freelance website တွေမှာတင်ထားတဲ့ project တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ…ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာပြန်တင်ပေးမယ်ဗျာ….
Project အချက်အလက်တွေကို English မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ချက်ချင်းပြန်တင်မယ်…အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ website မှာ…freelance project ကြီးပဲ…
တစ်ရက်တစ်ရက်ရာနဲ့ချီပြီးရှိနေမှာပေါ့…မြန်မာနီုင်ငံက freelancer တွေတင်မကဘူး.. တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာနိုင်ငံသား freelancer တွေပါ၀င်ပြီး bid လုပ်လို့ရတယ်….
ကျွန်တော်တို့ website မှာ bid လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က freelance website တွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီး bid လုပ်မယ်….
ပြီးရင်ငွေလွဲတဲ့ကိစ္စ……အဲဒါကတော့…freelance site တွေမှာ.. ကိုယ့်ဟာကိုယ် register လုပ်ပြီးရေးရင်…
ဘယ်လောက်ပြည့်မှငွေထုတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်…ပြီးတော့ transfer လုပ်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိတယ်…
ကျွန်တော်တို့ website ကတစ်ဆင့်သွားတယ်ဆိုရင်.. 20 ,30 လောက်ရတာနဲု့ထုတ်ပေးမယ်….
Freelance website တွေကနေ့ ပိုက်ဆံကိုကြတော့… paypal ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားက ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရဲ ့အကူအညီယူမယ်…
ဒါကအပေါ်ယံစဉ်းစားမိတာလေးပါ…အဲဒီမှာ risk တွေရှိတယ်…အဲဒီ risk တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလည်းရှိမှာပဲ… အဓိကကတော့ ယုံကြည်မှုပေါ့ဗျာ...ပြီးတော့... စဉ်းစားနေတာက
ထပ်သိချင်ရင် ကိုသူရအောင်ကိုသာ pm ပို့ပြီးမေး…:P:P:Pသူကအလုပ်အရမ်းများလို့...သူလဲလာဆွေးနွေးမယ်ထင်ပါတယ်…:5:
@moemyintshein ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ရှိတယ်ဗျ လူတွေက freelance ဆိုတာလေးကို မသိကြလို့ သူတို့မလုပ်ကြတာ paypal သာရှိလို့ကတော့ အခုဆိုရင် မြန်မာတွေအားလုံး အွန်လိုင်းတက်နေလောက်ပြီဗျ ကျွန်တော်တောင် ဟိုတစ်နေ့ကမှမသိတာ အဲဒါဘာလဲဆိုတာလေ
@csharp.crazier တကယ်လို့ အွန်လိုင်းပေးမန့် စပြီဆိုရင် တော့ ဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်ပေးဖို့ ကိုသူရ ကို ကျွန်တော်ပြောပေးပါ့မယ်ဗျား
အခုကိုသူရအောင်က freelance လိုမျိုးပေါ့လေ သူ ပရောဂျက်တွေချပေးမယ် ပြီးတော့ freelancer တွေလုပ်မယ်ပေါ့လေ အဲဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်
ပထမ မှာ paypal လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဗျား ဆိုဒ်တစ်ခုလုပ်မယ် အဲဒီဆိုဒ်မှာ log in name and pincode ဆိုတာလေးရှိမယ်
register လုပ်မယ့်သူက ကျွန်တော် တို့ဆီမှာ ပိုက်ဆံကြိုသွင်းရမယ် အဲဒါဆိုရင် သူဒီအကောင့်ကိုစသုံးနိုင်ပြီး ပြီးရင် freelance တစ်ခုဆောက်မယ်ဗျား အဲဒီမှာ ဒီ နာမည် ကို အကောင့်ထဲထည့်လိုက်မယ် ပိုက်ဆံရရင် သူ့အကောင့်ထဲကို ပိုက်ဆံလွဲပေးလိုက်မယ်
အဲဒါဆိုရင် မြန်မာ မှာ paypal လိုမျိုးဟာလေးပေါ်လာပြီပေါ့
ကျွန်တော်ဆိုဒ်မဆွဲတက်သေးပါဘူး ကိုသူရတို့ပဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပါ
ကိုဂျစ်ပစီ အဲဒီ virtual money ကို အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်အောင်လုပ်ပါလားဗျား..တစ်ခုတော့ရှိတယ်..မီးစက်တွေတော့ စျေးကောင်းလာမယ်ထင်တယ်နော်...ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင်းက လူတွေအနေနဲ့ အခု တစ်ကြိမ်သုံး ဖုန်းကဒ်လိုတော့ သက်တမ်း တိုတို မသတ်မှတ်ပဲ....credit card လို နှစ်သက်တမ်းနဲ့ သတ်မှတ်ရင် ၀ယ်သုံးမယ့်သူတွေလည်း အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ credit card အသေးစားလေးသဘောပဲပေါ့..ဒီပြည်တွင်းကတစ်ဖွဲ့က အဲဒါကိုတာ၀န်ယူထိန်းထားရင်ရပါပြီ...ဒေ၀ါလီတော့ မခံလိုက်နဲ့ပေါ့..ဟီး..ဟီး..နောက်တာ..အဲဒါဆိုရင် ပညာရှင်တွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာ လိမ့်မယ်ထင်တယ်...အခုကျွန်တော်ဆို vb project ဆွဲပြီး ဘယ်ပို့ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်..ဆက်လဲ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး....
ပညာရှင် အားလုံးကို လေးစားလျက်...
ခက်တော့ခတ်တယ်ဗျ...ကျွှန်တော်တို့ကလုပ်ချင်ပါတယ်...ကျွှန်တော်ဆိုဂျစ်ပစီလိုပဲ အရမ်းစိတ်အားထက်သန်တာ...ဒါပေမယ့်အကြံတွေက လေထဲမှာတိုက်ဆောက်သလိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်...:D:D:D
အခုပဲကြည့်လေဗျာ... ဒီ တော့ပစ်ကို လာဆွေးနွေးတဲ့သူတွေမှာ...မင်မင်တွေမော်မော်တွေ..ဂုရုတွေ မပါဘူးလေ...အနော်တို့လို...ပေါက်စလေးတွေပဲရှိတယ်...:P:P:P
အနော်တို့က တကယ်တော့စိတ်ပဲရှိတာဗျ... သူတို့တွေတောင်မလုပ်နိုင်ကြ...လုပ်ဖို့မရဲကြတာဗျာ... အနော်တို့ကဘာမှမှ မဟုတ်တာ.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင်..စိတ်ဓတ်တော့တော်တော်ကျနေပြီ...
စိတ်လည်းပျက်တယ်...အားလုံးကို... risk တွေကမနည်းဘူးရှိတာနော်...လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့....စိတ်ကူးတာကလွယ်သလောက်စလုပ်ဖို့က အရမး်အရမ်းကို ခက်တယ်..
ကျွန် လည်း အွန် လိုင်း က နေ ဘယ် လို ငွေ ရှာ မ လဲ ဆို တာ စိတ် ၀င် စား တယ်
ဒါ ကောင်း တဲ့ အစီ အစဉ် တစ် ခု ပဲ သိပ် ကောင်း တဲ့ ဟာ ပဲ လုပ် သင့်တာ ပေါ ဗျား
အခုလောလောဆယ်တော့ ... ရှာရခက်သေးတယ်။ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် e-commerce ဆိုဒ်တွေလုပ်ထားဖို့ပဲ။ အဲဒီကနေမှ အတွေ့အကြုံတွေ စုဆောင်းပေါ့။ နောက်တစ်ချိန် online banking ဖွင့်ဖြိုးလာရင် ကိုယ်က pioneer ဖြစ်တော့ နောက်လုပ်တဲ့သူတွေထက်တော့ သာမှာပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ ... ဘယ်လိုရှာမလဲ ... ဘယ်လိုရှာကြမလဲ ... ဆိုတဲ့ idea တွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကို ... လေ့လာစုဆောင်းထားရင် နောင်တစ်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ သေချာပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အိပ်ဆိုက်ပေါ့
ဆက်လက်ချီတက်ကျပါဗျား တစ်ဝက်မှာ အားမလျော့သွားပါနဲ့ဗျား အားပေးလျက်
ွွှွှွှွှွှှ ်ွွှွှွှွှွှွှွှှအ၇မ်းစိတ်၀င်စားပါတယ်.....ဒါပေမယ့်အကိုတို့ပြောတာတွေ .. အများကြီးနားမလည်ဘူးခင်ဗျ ....:p
အကိုတို့လုပ်ဖြစ်ရင် .. အဆင်ပြေမယ့်နေရာကပါ၀င်ချင်ပါတယ်...
me too. သိပ်မသိပေမယ့် စိတ်၀င်စားပါတယ်။ လုပ်ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေတဲ့နေရာကပါချင်ပါတယ်
ကျွန်တော့မှာ Bank Account ရော Credit Card ရော PayPal Account ရော ရှိတယ်
ဒီတော့ cash transfer ကို ကျွန်တော့ Account ကနေတစ်ဆင့် လွှဲ
member တွေ project လုပ်ပြီးရှာသမျှပိုက်ဆံကို ထိုင်သုံးဖို့တာဝန်လုံးဝယူတယ်:D
ကိုအင်ဖိုဖရီကြီး အကောာင့်နံပါတ်တွေ အကုန်ပြောနေရင်ပင်ပန်းနေပါအုန်းမယ်။ ကျနော့်ကို credit card number (16 digits) နဲ့ အနောက်က CVC ပဲပေးပါ။ တစ်လုံးတည်း တစ်ခဲတည်းဝင်လာစေရပါမယ်။ (Bill တွေ)
ကိုအင်ဖိုဖရီကြီး အကောာင့်နံပါတ်တွေ အကုန်ပြောနေရင်ပင်ပန်းနေပါအုန်းမယ်။ ကျနော့်ကို credit card number (16 digits) နဲ့ အနောက်က cvc ပဲပေးပါ။ တစ်လုံးတည်း တစ်ခဲတည်းဝင်လာစေရပါမယ်။ (bill တွေ) :d
အပေါ်ကမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပေးတဲ့လင့်ထဲမှာ မြန်မာအိုင်တီက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွေ့ လို့သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ Business English ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက််ကို ထောက်ခံပါတယ်။ Online မှာ job opening တွေ တွေ့တယ်ပဲ ထားဦး၊ offer လုပ်ဖို့ စာတစ်စောင်ဖြောင့်အောင် ဘယ်လိုရေးကြမလဲ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပညာ နယ်ပယ်မှာ နိုင်ငံခြားက ငတိတွေနဲ့ အပြိုင်ကျဲနိုင်အောင်လောက် တစ်ကယ်တတ်မြောက်နေကြပြီလားဗျ။
နာဆာလို အင်ဂျင်နီယာစူပါတွေချည်းရှိတဲ့ နေရာတောင် ပရောဂျက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘာလို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ခွာခွာလုပ်နေကြတာလဲ။
ရှင်းပါတယ်။ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ယူရပါမယ်။ အခုအကြံရ၊ အခုဒိုင်းကနဲ့ ထလုပ်လိုက်လို့ မရပါဘူး။ အားလုံးပဲ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည့်မှူရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြင်ဆင်ကြပါအုန်း။
freelance porjects ဆိုတာဘာကိုပြောတာလည်းဗျ တော်တော်ကိုတုံးတဲ့ကျွန်တော့ကို ရှင်းပြပေးပါလား..:D:D:D
နေယံလင်း wrote: »
စလုံးပေါင်းမှားနေတာ ထောက်ပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... freelance projects လို့ရေးတာပါ ... တင်ချင်စိတ်လောသွားလို့ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ... နောင်သတိထားပါ့မယ်
အွန်လိုင်းကငွေရှာလိုသူများကို့ကျွမ်းကျင်မှူ့ကို အသင့်ပြင်ထာ:ပါ မကြာခင် EDU project တခူ့စဖို့ရှီပါတယ် မြန်မာစာ/English/IT အတွက်အလုပ်များပါမှာပါ လစာကတော့ သူမနာကိုမနာပေါ.:39:
ကို gipsy အကြံကောင်းတယ်
အဲ့လို အဖွဲ့လေး..paypal လိုအဖွဲ့လေး မြန်မာမှာပေါ်လာဖို့ တကယ် မျှော်လင့်ပါတယ်..။
နောက်ပြီး paypal, alertpay တို့လို့နဲ့ပါ တဖြည်းဖြည်း join လို့ရရင်သိပ်ကောင်းပေါ့...။
ကိုကောင်းကင်ပြာ ရေ ကျေးဇူးပါဗျို့ ကျွန်တော်အစပိုင်းကတည်းကပြောခဲ့တာလေး အမ်ဇက်မှ မော်မော် ကိုသူရအောင်က ဒီ project လေးကိုဆက်လုပ်နေပါတယ် သူပြီးရင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလေးရှီပါတယ်ဗျား ဒါပေမယ့် ဘာမှမတက်သေးတာဆိုတော့ တက်အောင်အရင်သင်လိုက်ဦးမယ် ပြီးမှကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်တော့မယ်ဗျား ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ project ပြီးမှကူးပေးခွင့်ရပါတော့မယ်ဗျား
MMITP က ဘလောဂ့်လေးပါ...
ဒီ blog မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ online outsource projects တွေကို ဘယ်လိုယူရေးလို့ရသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရေးမှာပါ။
online က outsource projects တွေကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က developer တွေအေးအေးဆေးဆေးရေးနိုင်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ company တွေ၊ organization အကြီးကြီးတွေနဲ့ရေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ယောက်တည်း၊ ဒါမှမဟုတ် team လေးတွေအနေနဲ့ရေးတာကိုပဲ အဓိကထားသွားမှာပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချက်အလက်တွေအားလုံးကို အမှန်လို့အာမမခံပါ။
information အနေနဲဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ blog မှာပေးတဲ့ link တွေကလည်း ကျွန်တော်သိသလောက်သာ ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ use your own risk ပါ။ ll take no responsiblity losses resulted employing information stated here.)
မြန်မာနိုင်ငံကနေ outsource projects တွေကိုယူရေးတော့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လို individual freelance ရေးတဲ့ developer တွေအနေနဲ့အဓိကတွေ့ကြုံရမယ့် အခက််အခဲ နှစ်ခုရှိပါတယ်။
တစ်ခုကတော့ money transfer အခက်အခဲနဲ့ နောက်တစ်ခုက communication အခက်အခဲပါပဲ။ အဲဒီနှစ်ချက်ကိုလည်း ရအောင်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
outsourcing websites အများစုကတော့ အခမဲ့ register လုပ်လို့ရပါတယ်။
elance လို professional outsourcing site တွေကတော့ registration fee တော်တော်များများ ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ကုမ္ပဏီတွေပဲသုံးကြတာများပါတယ်။ ကျန်တဲ့ getafreelancer တို့ admiz တို့လို site မျိုးတွေကတော့ free register လုပ်လို့ရပါတယ်။
outsource project တွေကို ယူရေးမယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေကို ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ outsourcing website မှာ register လုပ်ရပါမယ်။ ဘယ် website တွေရှိလဲ ဆိုတာရေးပြရင်တော့ ဆုံးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
google ကနေ ရှာလိုက်ရင် အများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတယ် getafreelancer မှာ register လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ link (http://www.getafreelancer.com) ကနေ သွားလို့လည်းရပါတယ်။ အဲဒီကိုယ်ကြိုက်တဲ့ website မှာ register လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီ website မှာတင်ထားတဲ့ projects တွေကို bid လုပ်ခွင့်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ project တစ်ခုခု တွေ့ပြီဆိုရင် bid လုပ်လိုက်ပြီးဘယ်လောက်နဲ့လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ပြောရပါမယ်။
ကိုယ့်မှာဒီ bid လုပ်တဲ့ project နဲ့ဆိုင်တဲ့ experience ဘာရှိလဲဆိုတဲ့ description လေးကိုလည်းရေးပေးရပါမယ်။
bid လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဲဒီ buyer ကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ private message ပို့လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင်မို့လို့ provider အများစုက bid လုပ်တဲ့အခါမှာ description ကို အများကြီးမရေးတော့ပဲ နောက်မှ private message ပို့လေ့ရှိပါတယ်။
register လုပ်တုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုလည်း သေချာရေးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှကိုယ်လုပ်တဲ့ bid ကိုစိတ်၀င်စားတဲ့ buyer က၀င်ကြည့်အခါမှာ စိတ်၀င်စားမှုရမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ bid price ကိုလည်းသင့်တော်တဲ့ စျေးတစ်ခုခုနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ နည်းရင်ပြီးရောဆိုပြီး အနည်းဆုံးနဲ့ bid လုပ်တဲ့အခါမှာ buyer ဘက်ကယုံကြည်မှုသိပ်မရှိတတ်ပါဘူး။
သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင် project တွေကို outsource လုပ်လိုက်ကတည်းက သူတို့အတွက်အနည်းနဲ့အများ ကုန်ကျစရိတ်က သက်သာပြီးသားဖြစ်တဲ့ အတွက် 10,20 လောက်ကွာတာကို မကြည့်တတ်ပါဘူး။ စိတ်ချယုံကြည်လောက်တဲ့ လူကိုပဲရွေးလေ့ရှိပါတယ်။ (ကျောင်းသား project လေးတွေကလွဲရင်ပေါ့) ဒီ bid လုပ်တဲ့ အဆင့်ကတော့ marketing လုပ်တဲ့ အဆင့်လို့ပြောရပါမယ်။
ကိုယ့်အရေးအသား နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ byer အဓိကစိတ်၀င်စားနိုင်တယ့်အချက်တွေကတော့ သူ့ project နဲ့ဆိုင်တဲ့ experience တွေပါပဲ။
ကိုယ့်မှာ အဲဒါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် bid description မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ pm ပို့တဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သေသေချာချာ ရေးပေးသင့်ပါတယ်။
byer ဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ bid ကိုစိတ်၀င်စားတဲ့အခါမှာ project sample တွေပြဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့သိချင်တဲ့ information တစ်ခုခု ကိုမေးဖို့အတွက် private message ပို့တတ်ပါတယ်။
အဲဒီ message တွေမှာလဲ ကိုယ်နဲ့ ညှိလို့ရတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ကို service provider အနေနဲ့ရွေးလိုက်ပါမယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ website ကနေကိုယ့်ဆီကို ဒီ service buyer ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ information တွေပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ့် account ထဲကနေ website ရဲ့ service fee ကိုလည်း နှုတ်သွားတတ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းကတော့ ကိုယ်နဲ့ buyer နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး project နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေဆက်ပြောပြီးဆက်လုပ်ရတော့မှာပါပဲ။
တစ်ချို့ buyer တွေက skype နဲ့ contact လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကအခြေအနေတွေကို ပြောပြပြီး ဘယ်လို communication နည်းကအဆင်အပြေဆုံးလဲ ဆိုတာ ညှိရပါမယ်။
နောက်တစ်ချက်က time zone ကွာခြားချက်ကြောင့် သူတို့ office hour အတွင်းမှာ contact လုပ်မယ့်အချိန်ကို လည်း ကိုယ့်ဘက်ကအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။
အလုပ်စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် buyer ကို escrow payment တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။ စပေါ်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
website တွေကလည်း escrow payment လိုမျိုး feature တွေပေးတတ်ပါတယ်။
escrow payment လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် buyer ဘက်ကလည်းအဲဒီ ပိုက်ဆံကို cancel ပြန်လုပ်လို့မရသလို provider ဘက်ကလည်း အဲဒီပိုက်ဆံကို ထုတ်လို့မရသေး ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘက်က project ကိုပြီးစီးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှ buyer ဘက်ကနေ escrow ကို release လုပ်ပေးလိုက်မှ ထုတ်လို့ရပါတယ်။
ထုတ်တယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံအပြင်ရောက်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ website မှာ register လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့် account ထဲကိုရောက်လာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ account ထဲကပိုက်ဆံကိုအပြင်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာဆက်ပြောပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ international money transfer တွေ၊ online banking တွေလုပ်လို့မရသေးတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ အဆက်အသွယ်တစ်ခုခုကို အသုံးပြုရပါမယ်။ ပထမဆုံးကိုယ် အသုံးပြုတဲ့ websites က money withdraw အတွက် ဘာတွေ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကို အရင်လေ့လာကြည့်ပါ။
များသောအားဖြင့် paypal ကိုတော့ ခွင့်ပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ bank account, credit card ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို online money transfer websites တွေဖြစ်တဲ့ paypal တို့၊ moneybookers တို့မှာ account ဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အဲလို service လုပ်ပေးတဲ့လူရှိလား စုံစမ်းကြည့်ပါ။
အဲဒီ money transfer website တွေမှာ ငွေလွှဲလို့ရတယ့် account ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့လွှဲလို့ရပါပြီ။ လွှဲချင်တဲ့ လူရဲ့ email address နဲ့လွှဲ လိုက်ရုံပါပဲ။
ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လွှဲခိုင်းရပါမယ်။ outsoure website တွေရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ flow ကတော့ project post လုပ်ချင်တဲ့ service buyer တွေကို free post လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
getafreelancer လို website တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့လို service provider တွေကိုလည် free register လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ bid လုပ်ထားတဲ့ project ကို buyer က ရွေးသွားပြီဆိုရင် သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆီကနေ ကိုယ် bid လုပ်တဲ့ price ရဲ့ percent တစ်ခုခုပြန်ယူပါတယ်။
percent နဲ့မပေးချင်ဘူးဆိုရင် premium account (gold member account) တွေ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ account ၀ယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ bid လုပ်လို့ရတယ့် အရေအတွက်လည်းများသွားပါတယ်။
buyer တွေကလည်း outsource ကို professional လုပ်တဲ့ provider လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုရွေးဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းပိုများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စစချင်းလုပ်တဲ့လူတွေကတော့ free account နဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ် အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း price များတဲ့ project တွေကို bid လုပ်မှသာ account ၀ယ်ဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ online outsource project တွေကို ဘယ်လိုစလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ သိချင်တာရှိရင်မေးကြပါ။ သိထားတာရှိရင်ထပ်ပြောပေးကြပါ။ ဒါမှကျွန်တော်တို့အားလုံး community ရဲ့ benefit တွေရနိုင်မှာပါ။
လူသုံးများတဲ့ outsource site တွေကိုဒီမှာ list လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..